देख्दा मात्र गुड लक हुने १९० बर्षको कछुवा, यही नै हो अहिलेसम्मको जिवित सबैभन्दा जेठो जीव ! - Nepali in Australia
July 13, 2021 autherLeaveaComment on देख्दा मात्र गुड लक हुने १९० बर्षको कछुवा, यही नै हो अहिलेसम्मको जिवित सबैभन्दा जेठो जीव !
कछुवाको प्रकार तथा पाइने स्थान-कैयौँ देश र द्वीपमा कछुवा पाइन्छ। ती मध्ये कतिपयमा विशेष किसिमको रङ्ग, खुवी, विशेषता र गन्ध हुने गरेको पनि पाइएको छ। अमेरिकामा एउटा यस्तो किसिमको कछुवा पाइन्छ जसलाई दुर्गन्धको भाँडो नै भनिन्छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त
मंगलबारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले पनि खोप लगाउन पाउने (जानकारीका लागि सेयर गराै)
टेलिभिजनले तलब नदिएपछी लाइभ टिभीमा समाचार पढ्दापढ्दै बीचमै पैसा मागे (भिडियो)